Wararka - Hordhaca Isticmaalka Polyacrylamide
Hordhaca Isticmaalka Polyacrylamide
Hordhac Ee Use Ee Polyacrylamide
Waxaan horeyba u fahamnay howlaha iyo saameynta wakiilada daaweynta biyaha si faahfaahsan. Waxaa jira kala soocid badan oo kala duwan sida ku xusan shaqooyinkooda iyo noocyadooda. Polyacrylamide waa mid ka mid ah polymer polymer-ka toosan, silsiladdiisa molecular-ka waxaa ku jira tiro cayiman oo xagjir ah. Waxay soo jiidan kartaa jajabyada adag ee biyaha ku xayiran, ion buundooyinka ama isku-darka isku-darka ubaxyada waaweyn iyada oo loo marayo dhex-dhexaadnimada kharashka, dardar-gelinta qashin-qubka qaybaha la laalay, dardar-gelinta sharraxaadda xalka, iyo hagaajinta saamaynta shaandhaynta. Isticmaalka faahfaahsan waxaa loo soo bandhigi doonaa sida adiga hoosta kuu ah.
1. Ku isticmaal dheecaanka dhoobada
Markii loo isticmaalo biyo daadinta, waxa loo yaqaan 'polyacrylamide cationic' ayaa lagu dooran karaa iyadoo loo fiirinayo dhoobada, taas oo si wax ku ool ah u fayoobi kara dhoobada ka hor inta uusan jilicdu gaarin saxaafadda miiraha. Markay biyo daadinayaan, waxay soo saartaa flok waaweyn, kuma dhegto dharka miiraha, mana kala firidho inta lagu jiro qalabka miiraha. Keegga dhoobadu waa mid qaro weyn oo waxtarka fuuqbaxu wuu sarreeyaa.
2. U isticmaal daaweynta biyaha qashinka dabiiciga ah
Marka loo isticmaalo daaweynta bullaacadaha guryaha iyo biyaha wasakhda ah ee dabiici ah, sida cuntada iyo qashinka aalkolada, biyaha wasakhda ah ee ka yimaada dhirta lagu daweeyo bullaacadaha magaalooyinka, biyaha qashinka biirka, biyaha wasakhda ah ee warshadda MSG, biyaha wasakhda ah ee biyaha, iwm. cusbada anionic, nonionic iyo aan dabiici ahayn dhowr jeer ama tobanaan jeer ka sareeya, maxaa yeelay noocan ah qashinka noocan ah guud ahaan waa lacag la'aan.
3. Sifeynta biyaha ceyriinka ee wabiyada iyo harooyinka
Polyacrylamide waxaa loo isticmaali karaa daaweynta tuubada biyaha webiga sida isha biyaha. Sababtoo ah qaddarkiisa oo hooseeya, saameyn wanaagsan iyo qiimo jaban, gaar ahaan marka loo isticmaalo iyadoo lala kaashanayo flocculants aan dabiici ahayn, sidaa darteed waxaa loo isticmaali doonaa dhirta biyaha sida flocculant ka Yangtze River, Yellow River iyo basaska kale.
Waxyaabaha kor ku xusan waa isticmaalka faahfaahsan ee polyacrylamide. Maaddaama ay tahay wakiilka daaweynta biyaha, waxay leedahay waxqabad badan oo ku saabsan daaweynta bullaacadaha. Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro isticmaalkeeda muhiimka ah ee saddexda dhinac ee kor ku xusan, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa wakiil xoojin iyo waxyaabo kale oo lagu daro warqad sameynta si loo kordhiyo heerka haynta ee fillerka iyo midabbada, iyo kordhinta xoogga warqadda; sida saliidaha lagu daro saliida, sida dhoobada ladagaalanka dhoobada.Waa wakiilo dhumuc weyn oo loogu talagalay asiidhaynta saliida; waxay door weyn ka ciyaari kartaa wakiilka qiyaasta dharka, waxqabadka cabbirka xasilloon, cabbir yar, heerka dillaaca hooseeya ee dharka, iyo dusha marada oo siman.